आँधीखोला खवर | महाशिवरात्रि किन मनाइन्छ ? - आँधीखोला खवर महाशिवरात्रि किन मनाइन्छ ? - आँधीखोला खवर
हिन्दु शास्त्र अनुसार भगवान शिवलाई सबै देवताहरु मध्ये श्रेष्ठ मानिन्छ । ब्रह्माण्डका सबै देवता र मानव जातिले भगवान शिवलाई प्रसन्न पार्न विभिन्न तरिकाले पूजा, आराधना र व्रत बस्ने गर्छन् । तर यी सबै दिनमा महाशिवरात्रिलाई सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ किनभने यस दिन भगवान शिवले आफ्ना भक्तहरूलाई आशीर्वाद दिन सबैभन्दा विशाल रूप धारण गर्नुहुन्छ।
यी हुन् महाशिवरात्रिमा सम्बन्धि २० लाइन
१) महाशिवरात्रिलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको सबैभन्दा पवित्र व्रत र पर्व मानिन्छ ।
२) महाशिवरात्रि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन चतुर्दशीका दिन मनाइन्छ।
३) यसै दिनबाट सम्पूर्ण सृष्टिको सञ्चालन सुरु भएको मानिन्छ ।
४) यस दिन भगवान शिव र माता पार्वतीको विवाह समारोह सम्पन्न भयो।
५) महाशिवरात्रि पर्व भारतका साथै अन्य धेरै देशहरूमा पनि हर्षोल्लासका साथ मनाइन्छ।
६) यस दिन भगवान शिवले समुन्द्र मन्थनबाट प्राप्त विष आफ्नो घाँटीमा बोकेर संसारलाई विनाशबाट बचाउनुभयो ।
७) यस दिन भगवान शिवको प्रत्येक मन्दिरलाई भव्य रूपमा सजाइन्छ र शिवलाई दूध वा जलले अभिषेक गरी पूजा गरिन्छ।
८) यस दिन भारतका अविवाहित युवतीहरूले मनपर्ने पति प्राप्त गर्नका लागि व्रत बसेर शिवको पूजा गर्छन् ।
९) बेलको पात, दतुरा, जुजुब फल र दूध अभिषेक गर्दा भगवान शिव निकै प्रसन्न हुने जनविश्वास छ ।
१०) शिव महापुराणका अनुसार यस रात भगवान भोलेनाथले ठूलो ज्योतिर्लिङ्गको रुपमा देखा परेका थिए र ब्रह्मा र विष्णुले उनको पहिलो पटक पूजा गरेका थिए ।
११) वर्षको १२ शिवरात्रिमध्ये महाशिवरात्रि सबैभन्दा कालो र ऊर्जावान रात हो।
१२) नवरात्रको तेस्रो अवधिमा, भगवान शिव प्रत्येक र प्रत्येक अनादि ज्योति स्तम्भको रूपमा पहिलो पटक प्रकट भए।
१३) त्यो स्तम्भको अन्त्यमा हाँस्दै ब्रह्मा र वराह बनेर विष्णुले पृथ्वीको मुनि त्यसको सुरुआत खोज्न थाले तर उनी असफल भए ।
१४) भगवान शिव पवित्र निराकार अग्नि ज्योतिर्लिङ्गको रुपमा प्रकट हुनुभयो ।
१५) यस दिन शिवको ६४ ज्योतिर्लिङ्ग प्रकट भएको भनिन्छ जसमध्ये १२ वटा मात्रै देखिन्छन् ।
१६) भगवान शिवलाई भोले, शंकर, महादेव, महाकाल, नटराज, नीलकण्ठ, शशिधर, गंगाधर, महारुद्र आदि धेरै नामले पुकारिन्छ।
१७) यस दिन भोले बाबाको पूजा आराधना गरी दिनभर व्रत बसी रात्रि जागरण गरी शिवलाई प्रसन्न पार्ने प्रयास गरिन्छ ।
१८) भगवान शिवको ऋषि स्वरूप र सर्प र बिच्छीको प्रेमले मानिसलाई बलिदान र प्राणीलाई मात्र प्रेम गर्न सिकाउँछ।
१९) नीलकण्ठको रूप कति अनुपम छ, त्यसैगरी उनको पूजा पनि अनुपम छ, भांग, दतुरा, बेलका पातहरू जस्ता जङ्गली फलफूलले मात्रै खुसी हुन्छन् ।
२०) महादेवलाई प्रसन्न पार्न कुनै कर्मकाण्ड, पूजा आदिको आवश्यकता पर्दैन, थोरै प्रसादले मात्र प्रसन्न हुन्छन्, त्यसैले उहाँलाई भोले बाबा भनिन्छ।